Switzerland: Munguva pfupi inotanga kuendesa pasi rose "basa revanhu" muSwitzerland - TELES RELAY
HOME » pasi rose »Switzerland: Munguva pfupi inotanga kuendesa nyika yose" basa revanhu "muSwitzerland
Switzerland: Munguva pfupi inotanga kuendesa pasi rose "basa revanhu" muSwitzerland
Iyo purogiramu yakatanga pakatanga kwemakore gumi ikozvino, mune ivhu pane PLR, vaduku neRomand, uye Association Association.Citoyen.ch (Swiss Association for the Promotion of Militia Engagement) yakanga isati yave yakangwara pane zvaaiita. Asi zvinyorwa zvino zvava kuda kugadzirira, kunyange kana paine zvimwe zvinyorwa zvigadziriswa.
Icho chirongwa chekutanga chirongwa chiri mukugadzirwa kwekugadzwa. Chinangwa ichi ndechekuunza pamwe chete vechidiki vanobva kuSwitzerland yose uye kubva kumapoka ose. Kuunganidzwa kwemasayina kunogona kutanga nguva inotevera gore rakatevera.
Mvumo yekuita zvematongerwo enyika
Iri basa revagari vemo raizova nebasa rinomanikidzwa, nekuda kwevarume nevakadzi vaduku, pamutemo wevarwi. Kushamwaridzana kunotarisa kubvunzurudza zvakadzama nenyaya 59 yeBumbiro reMitemo, ine ndima yekutanga nekuisa mutemo: munhu wose wekuSwitzerland nyika, mukadzi kana murume, anozadzisa kuzvipira kwevarwi kuitira kuti vabatsire vanhu uye nzvimbo, kunzi basa revanhu.
>> Teererai kumubvunzurudzo weNoémie Roten, mutungamiri wenyika weChita.Citoyen.ch, mu Forum:
Yakatumirwa zuro pa 18: 02
Vashandi vehondo vanovimbiswa
Vakatangisa vaifunga nezvekusimbisa vashandi veuto, vachibvumira Federal Council kuti vakurudzire varume vechidiki vechiSwitzerland kuti vaenderere kushanda semasoja. Icho chinotorawo kuvhara mubvunzo wekubatana kwevatorwa vanogara. Saka ikozvino kuchinja kukuru kwezvino mauto system.
Kana ichinyatsotanga gore rinouya, izvi zvichaita chero zvipi zvingabvumira kufungisisa kwenyika pamusoro pebasa rebasa revanhu, nepo Paramende ikozvino yakabvamburwa pakuvandudzwa kwebasa rehurumende.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.rts.ch/info/suisse/10441172-bientot-une-initiative-en-faveur-d-un-service-citoyen-global-en-suisse.html
China-Africa: "Migwagwa itsva yesilika ichavawo yehondo"